China Translucent Film Light Box Picture ifektri abakhiqizi | Lima
Mini LED IZwi
Insimbi engagqwali ngokunemba iZwi
I-Translucent Film Light Box Isithombe
I-lattice ekhanyayo enephepha elibonisa isithombe
Ukuphrinta kwedijithali Izinto ze-PVC Flex
Isetshenziswa kakhulu ngabaphrinta bedijithali ngezinhloso zokuphrinta kwezibhengezo, amabhodi wezimpawu, ama-Pennants, i-X Banner Stands, i-Pull up Stands, i-Hoarding, i-Backdrops.
Ithebula- Amanani wokucabanga we-Retro (Ngaphandle kohlelo kuma-Traffic Cones)
Le filimu ehlala isikhathi eside ilungele ukusetshenziswa kwezimoto zesikhathi eside nemotorsport, futhi inikezela ngenye indlela engasindi, eyonga ukonga.
Ukunamathela okuzenzakalelayo nge-ulwelwesi olungenayo i-bubble yesicelo samahhala esisheshayo nesibhamuza! (Ukulungele ukusebenzisa ngaphandle kwebhokisi, akukho ziketshezi ezidingekayo!)
Ubuchwepheshe bokuziphilisa (ukuklwebheka kuyanyamalala). Imelana nemihuzuko, amanzi kanye nobufakazi bamakhemikhali.
Isinamathelisi se-acrylic esiphephile, esingonakalisi esinempilo seminyaka eyi-10! (Ngeke udle ngokumbozwa noma ngokuthinta indawo) Ukusetshenziswa okuphephile nokususwa!
Le Vinyl ingafakwa kusetshenziswa i-3M 94 Primer ne-3M Edge sealer, lokhu akuphoqelekile, le mikhiqizo izothuthukisa ukunamathela futhi ingeze impilo ku-vinyl yakho. (Isembozo noma i-primer ngeke isuse i-glue, yonakalise i-vinyl noma yonakalise ukuthungwa ngokungafani namafilimu asezingeni eliphansi).
Igama lomkhiqizo IVinyl ekhanyayo
Ukusetshenziswa Isexwayiso sokuphepha
Isampula Kunikezwe Ngokukhululekile
Usayizi 1.22 * 45.7m / umqulu
MOQ 20 Qengqa
Ubude 50meters / roll
Ukuqina Iminyaka engu-2-3
Ukubonakaliswa kwezitika zezinto ezibonakalayo
I-tape ebonakalayo ekhanyayo ingakhombisa ukukhanya koqobo ngaphansi kokukhanyisa kwelambu lesibani sekhanda noma ukukhanya komgwaqo. Ngicabanga ukuthi abashayeli abaningi bayakwazi lokho uma ushayela emgwaqeni omkhulu. Njengoba igama liphakamisa, ukubukeka kungenye yezimpawu ezibaluleke kakhulu zezinto ezibonakalayo. Impela kungenxa yesimo sokukhombisa ukuthi izinto ezibonakalayo zingahlinzeka ngesiqinisekiso sokuphepha somuntu esisebenza ngempumelelo kakhulu futhi esinokwethenjelwa ebusuku noma endaweni ebukeka kabi
I-Wide-angle yezinto ezibonakalayo
Impahla ekhanyayo ivame ukuba ne-angle ebanzi engcono, ukuze ishidi elibonakalisayo noma indwangu ekhanyayo nayo ingagcina umphumela omuhle wokukhombisa, ikhanyisa ukukhanya ngqo noma kukhona i-angle ebanzi phakathi kwefilimu ekhanyayo nokukhanyisa.
Lesi sici esibanzi se-sheeting ekhanyayo sisetshenziselwa ukukhiqizwa kwezimpawu zethrafikhi nepuleti lelayisense yemoto, okuthuthukisa ukuphepha emgwaqeni wakho ngokukhanya okukhanyayo, okulula ukuqondakala.
I-tape ebonakalayo ekhanyayo ingakhombisa ukukhanya koqobo ngaphansi kokukhanyisa kwelambu lesibani sekhanda noma ukukhanya komgwaqo. Ngicabanga ukuthi abashayeli abaningi bayakwazi lokho uma ushayela emgwaqeni omkhulu. Njengoba igama liphakamisa, ukubukeka kungenye yezimpawu ezibaluleke kakhulu zezinto ezibonakalayo.
Impela kungenxa yesimo sokukhombisa ukuthi izinto ezibonakalayo zingahlinzeka ngesiqinisekiso sokuphepha somuntu esisebenza ngempumelelo kakhulu futhi esinokwethenjelwa ebusuku noma ezindaweni ezingaboni kahle.
Lokhu okungenhla kuyizici ezine ezivame kakhulu zezinto ezibonakalayo. Lapho kudizayinwa, ifektri ye-XW Reflective kufanele icubungule la maphuzu amane ezintweni ezibonakalisayo, ukuze la mathephu akhombisayo asetshenziswe kangcono ezidingweni zethu zansuku zonke.
Langaphambilini I-Translucent Film Light Box Isithombe
Olandelayo: Ifilimu eguquguqukayo
Ifilimu le-Vinyl Reflective
i-ranslucent Film Light Box
Ifilimu Yokukhangisa Ye-Vinyl Sheeting
I-Translucent Film Light Box
Reflective Self Yesigcilikisha Vinyl isikhangiso
indawo yezimboni tangqiaotang zhang jiagang idolobha lasechina